China Doosan Series Diesel Generator factory na ndị na-emepụta |Ike Mamo
1. arụmọrụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi, usoro kọmpat na ike dị elu.
2. Turbocharged, ikuku ikuku intercooled, obere mkpọtụ, ihe ọkụkụ dị mma.
3. The piston jụrụ usoro na-nakweere na-aghọta okpomọkụ akara nke cylinder na combustion ụlọ, nke na-eme ka engine na-agba ọsọ nke ọma na-enwe obere vibration.
4. Ngwa nke teknụzụ injection kachasị ọhụrụ na teknụzụ mkpakọ ikuku nwere arụmọrụ combustion dị mma na obere mmanụ ọkụ.
5. Iji ihe mkpuchi cylinder dochie anya, mgbanaka oche valve na tube nduzi na-eme ka nkwụsị nke engine dịkwuo mma.
6. Obere nha, ịdị arọ dị arọ, ike siri ike iguzogide ibu ibu, akụ na ụba na ntụkwasị obi.
7. Onye na-ebu ibu na-eji ike nke gas na-ekpocha ọkụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke ike na-arụ ọrụ dịkwuo mma, ka ọ na-eme ka ike mmepụta ya dịkwuo elu, belata ọnụ ọgụgụ mmanụ ọkụ, na-ehicha ihe ọkụkụ, belata ụda ugboro ugboro ma mee ka ndụ ọrụ dịkwuo ogologo.
Nke gara aga: ISUZU Series Diesel Generator
Osote: Deutz Series Diesel Generator